Madaxweynaha oo soo Bandhigay Sababaha uu Muuse Biixi ugu Xushay Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE | Dhamays Media Group
Madaxweynaha oo soo Bandhigay Sababaha uu Muuse Biixi ugu Xushay Murrashaxa Madaxweynaha KULMIYE
“Waxaan ugu baaqayaa taageerayaasha KULMIYE in ay si buuxda isu bar-bar taagaan, isla markaana u codeeyaan murraxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka xisbiga KULMIYE”
Burco (Dhamays) – Madaxweynaha Jamayshuuriyadda Somaliland Md. Axmed Maxamed Maxamuud (Siilaanyo), ayaa cod dheer ugu baaqay taageerayaasha xisbul-xaakimka KULMIYE inay si buuxda codkooda u siiyaan murrashaxa Madaxweynaha xisbigaas Md. Muuse Biixi Cabdi oo uu sheegay inuu yahay hoggaamiyaha uu u xushay inuu ku wareejiyo talada dalka marka uu xilka ka dego.
Madaxweyne Siilaanyo khudbad u jeediyey kumanaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga KULMIYE oo cududooda ololaha doorashada ku soo bandhigay fagaaraha Khayriyada magaalada Burco ee xarunta Gobolka Togdheer maalintii Axadda, waxa uu si faahfaahsan uga warramay waayihiisa hoggaaminta dalka iyo waxqabadyada lagu majeerto xukuumaddiisa oo uu tilmaamay inay tahay midhaha guushii 7 sanno ka hor reer KULMIYE ugu doorteen xilka Madaxweynenimo ee uu hadda ka degayo.
“Farxad weyn bay ii tahay in aan saaka [shalay] dib ugu soo noqdo goobtan Khayriyada Burco oo ay iigu dambaysay waqti aad u dheer. Xasuus dheer ayey igu leedahay khayriyadan Burco oo aan taageerayaasha xisbiga KULMIYE waqtiyo badan oo kala duwan kala hadli jiray aniga oo ah musharax Madaxweyne. Eebbe mahaddii maanta waxaan idin horjoogaa aniga oo ah madaxweynihii qarankan, isla markaana aan naf-tayda cuud, cod iyo cudud toona idiinka rabin.
Xilkan Madaxweyne ee aan wareejin doono muddo yar kadib, kuma iman xoog iyo xeelad toona. Hase-yeeshee, waxaan ku haaneeday codkii ay ii hibeeyeen taageerayaasha xisbiga KULMIYE ee lixda gobol doorasho ee dalka ku kala sugan. Dhacdadan taariikhiga ah waxay saamayn ku leedahay noloshayda qayb ka mid ah, mana aha mid aan abidkay illaawi karo,” ayuu Md. Siilaanyo ku bilaabay hadalkiisa.
Waxa kaloo Madaxweynaha Somaliland oo si aad ugu weyn ugu mahadnaqay guud ahaan taageerayaasha xisbul-xaakimka KULMIYE ee hore isaga u doortay, haatanna diyaarka u ah inay codkooda ku taageeraan murrashaxiinta xisbiga uga qaybgalaya doorashada Madaxtooyada ee ololaheedu dalka ka bilaabmay.
“Aniga oo munaasibaddan ka faa’iidaysanaya waxaan jecelahay in aan halkan uga mahadceliyo taageerayaashii habeen iyo maalin muddada dheer hiilka iyo hooda ila hareera taagnaa. Mar labaad, waxaan si weyn ugu mahad-celinayaa dhammaan wax-garadkii, aqoonyahanka, waayeelka, haweenka iyo hal-doorka dhallinyarada ee codkoodu suurtogaliyey in uu KULMIYE guulaysto, isla markaana aan noqdo Madaxweynaha Dhamayshuuriyadda Somaliland.
Sidoo kale, waxaan uga mahad-celinayaa guud ahaan shacbi-weynaha Somalilandyuhuuntii, yidi-diilladii, iskaashigii iyo wada-shaqayntii, ay isla bar-bar taageen xukuumadda xisbiga KULMIYE ee aan odayga u ahay.”
“Waa hubaal, in xisbiga KULMIYE ku guulaystay hoggaamintii talada qaranka, mudadii uu dalka dawladda ka ahaa. Waxa hubaal ah in taageerayaashii noo codeeyey aanay guul-darraysan oo aanay is-ciil kaambiyeyn, isla markaana aanay fartoodii marnaba hiifayn. Waxaan leeyahay KULMIYE wuu guulaystay, dhammaanteenna waynu guulaysannay.
Waxa lib idiinku filan in aan taladiinnii iyo tacabkiinnii midna aan lagu khasaarin. Waxa lib idiinku filan in xukuumaddii xisbigii aad doorateen la mahadiyey. Abaalkii aad aniga iyo xisbiga KULMIYE u gasheen waxaannu ku gudnay, in aannu dalka ka hirgelinnay horumar ballaadhan iyo is-beddel laxaadle oo sida cad-ceedda u ifaya. Waxaannu ciwad-celin idiinka dhignay in aannu fulinnay barnaamijkii xisbiga KULMIYE iyo ballamihii aannu idiin qaadnay. Waxaan leeyahay taageerayaasha xisbiga KULMIYE sidii aad noogu listeen ayaannu idiinku hambaynay.”
Waxa uu intaas sii raaciyey, “Xilkii aad ii doorateen waxaan ummadda Dhamayshuuriyadda Somaliland ugu maamulay si caddaalad, sinnaan iyo xaqsoor leh. Xaasha, degaan, degaan kama xigsan, gobolna, gobol kale, kama jeclaysan, isla markaana ma kala dhaweysan, intiinii ii codaysay iyo intii iga codaysay. Waxaan dalka ku soo maamulay muddadii aan qarankan hoggaamiyaha ka ahaa, dulqaad, dad isku-wad, dan guud jacayl, dir-sooc la’aan, danaysi nacayb iyo dareen oday-nimo,” ayuu yidhi Madaxweyne Siilaanyo.”
Madaxweyne Siilaanyo oo ka hadlayey muhiimadda ay Somaliland u leedahay doorashada Madaxtooyada ee la filayo inay dalka ka qabsoonto 13-ka bisha November ee soo socota iyo kalsoonida uu ku qabo murrashaxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka ee xisbiga KULMIYE, waxa uu yidhi; “Dhowaan waxa dalka ka dhici doonta doorashadii Madaxtooyada Dhamayshuuriyadda Somaliland, taas oo lagu dooran doono madaxweynihii i beddeli lahaa, isla markaana qarankan hoggaamin lahaa shanta sanno ee soo socota. Madhaxa iyo maxsuulka doorashadani waa mid saamayn weyn ku leh nolosha iyo mustaqbalka shacabka iyo muwaaddiniinta Somaliland.
Sidaa darteed, waxa waajib ku ah ruux kasta oo leh xaq cod-bixineed in uu u miidaan dayo codkiisa. Waxaan idiinku baaqayaa in aad doorashada ku gashaan nabadgelyo iyo deganaansho. Sidoo kale, waxaan idiinku baaqayaa in aad ixtiraamtaan aragtiyaha iyo afkaaraha idinka soo horjeeda. Anigu waxaan ummadda u dooray in hoggaamiyihii i beddeli lahaa uu noqdo murrashaxa Madaxweynaha ee xisbiga KUMIYE, Muuse Biixi Cabdi, kaas oo ah siyaasi waayo-arag ah oo ay ku duugan tahay karti, hufnaan iyo aqoon badan.”
Madaxweynaha oo sii faahfaahinayey sababaha uu murrashaxa madaxweynaha KULMIYE Md. Muuse Biixi Cabdi ugu doortay inuu noqdo hoggaamiyaha qaranka Somaliland ee isaga beddeli doona, isagoo taageerayaasha xisbul-xaakimkana ugu baaqay inay codkooda si buuxda u siiyaan.
“Soomaalidu waxay ku maahmaahdaa, ‘Hebel, jid mala martay, jabad mala degtay, jidiin mala cuntay.’ Haddaba, waxaan leeyahay Muuse ciyaar iyo caaddifad midna kuma dooran ee aqoon dheer baan u leeyahay. Kow iyo soddonkii sannadood ee noloshayda u dambeeyey, wuxuu ka mid ahaa raggii garabka iyo gaashaanka ii ahaa ee igu gedaannaa. Muuse, waxaan la maray jid dheer, oo waxaan la degay jabad, oo xataa ardaagii geel-jirahana wada seexannay. Sidoo kale, jidiinna wada cunnay, oo iska daa wax kale’e jabad cidla’ ah labadayada oo qudhi annagoo qatan afar caano-maal hilib sakaaro ku dubannay.”
“Sidaa darteed, waxaan ugu baaqayaa dhammaan taageerayaasha xisbiga KULMIYE in ay si buuxda isu bar-bar taagaan, isla markaana u codeeyaan murraxiinta Madaxweynaha iyo Madaxweyne-ku-xigeenka xisbiga KULMIYE. Waxaan aaminsanahay in mudane Muuse Biixi Cabdi uu yahay hoggaamiyaha ugu habboon ee halkaa ka sii wadi kara hiigsigii aan lahaa iyo horumarka dalku u baahan yahay mustaqbalka dhow iyo ka dheer,” ayuu khudbaddiisa Madaxweynaha Somaliland ku soo afmeeray khudbaddiisa ibo-furka ololaha doorashada madaxtooyada ee xisbul-xaakinka KULMIYE.
Previous: Xaalad aan Mustaqbalkeeda la Saadaalin Karin oo soo Wajahday Shacabka Catalonia
Next: Somaliland: Taageerayaasha Xisbiga WADDANI oo Dhoola-tus ku soo Bandhigay Fagaarayaasha Magaalooyinka Dalka